ओलीको ‘यू टर्न’ र उत्ताउला समर्थकहरु ! - NepaliEkta
ओलीको ‘यू टर्न’ र उत्ताउला समर्थकहरु !
6 June 2021 Nepaliekta	0 Comments
81 जनाले पढ्नु भयो ।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नाकाबन्दी गर्दा राष्ट्रको पक्षमा चट्टानी अडान लिए । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरे । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर छापिएको नक्सालाइ संसदबाट पास गराए । ओलीका ती कार्य अवस्य पनि राष्ट्रियताको पक्षमा थिए र तिनले राष्ट्रव्यापी समर्थन पनि प्राप्त गरे । त्यति मात्र होइन, मधेसवादी संगठनहरुले आफ्ना राष्ट्रघाती मागलाई समावेश गर्न संविधानमा संशोधन गर्न राखेका मागलाई ओलीले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरे । त्यही कारणले नै उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरीएका थिए ।
ओलीले गरेका यी कामहरू अवस्य पनि सकारात्मक थिए । त्यसको समर्थन गर्नु सबै रास्ट्रवादी शक्ति र नागरिकको दायित्व बन्दथ्यो र त्यसै गरे पनि । तर उनै केपी ओलीले छोटो अबधिमै आफूले गरेका केही सकारात्मक कामले प्राप्त गरेका लोकप्रियताबाट हौसिएर देशमा सर्वसत्तावाद नै लागू गर्न खोजे । जसबाट उनको सत्ता जोखिममा पर्यो ।
उनै केपी ओली हुन् , जसले आफ्नै कारणले जोखिममा परेको सत्ता जोगाउन के सम्म गरेनन् ? भारतको साम्राज्यवादी र विस्तावादी चरित्रको विरोध गरेर लोकप्रिय बनेका ओलीले त्यही भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँग गोप्य भेटपछि एक पछि अर्को गर्दै लोकतन्त्र विरोधी, गणतन्त्र विरोधि र राष्ट्रियता विरोधि कदमहरु चाल्दै गए । जननिर्वाचित संसदलाइ दुई–दुई पटक विघटन गरे र सो कार्यमा गणतन्त्रको प्रतिकको रूपमा रहेको संस्था राष्ट्रपतिलाई समेत दुरुपयोग गर्न सफल भए । आफैँद्वारा राष्ट्रघाती करार गरेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत जारी गरेर ठूलो राष्ट्रघाती काम गरे ।
पछिल्लो पटक भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दा सिमानामा बसेर नाकाबन्दीलाई सहयोग गरेका र नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा करार गरेका राजेन्द्र महतोको समूहलाई सरकारमा सहभागी गराए । सपथ लिएको केही समय नबित्दै नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री महतोले पुनः दोहोर्‍याउँदै ‘नेपाल बहुल राज्य हो र त्यसलाई वैधानिकता दिन आफ्नो अभियान जारी रहेको बताए ।
हिजो केपी ओलीले लिएका कयौं अडानहरु राष्ट्रियताको पक्षमा थिए, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाको पक्षमा थिए । तर, आज ओली आफ्ना पूर्व अडानहरुबाट ‘यू टर्न’ भएका उनको भनाई र गराईबाट प्रष्ट देखिएको छ । तैपनि कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र उनका समर्थकहरु अझै पनि केपी ओलीले गरेका (कु) कार्यप्रति समर्थन गर्न रमाइलो मानिरहेका छन् । ओली र उनको सरकारले गरेका यसप्रकारका लोकतन्त्र विरोधी र रास्ट्रघाती कार्यहरूको पक्षमा समेत वकालत गर्ने हे युवा तथा बुद्धिजीवी साथीहरू कुनै कार्य सुल्टो गर्दा नि ठिक र त्यसको ठिक बिपरित उल्टो गर्दा नि कसरी ठिक हुनसक्छ ?
पार्टी,नेता र चुनाव चिन्ह भन्दा उसले (पार्टी र नेताले) राष्ट्र,जनता र लोकतन्त्रबारे लिने नीति नै प्रमुख कुरा हो । आफूले समर्थन गरेको पार्टी र नेताले जे गर्दा पनि वकालत गर्दै जाने हो भने देश र जनताको भविस्य के होला ? नेपाल रहे पार्टी बन्लान, भत्कलान र फेरि बन्लान । चुनाव जित्लान, हार्लान र फेरि जित्लान । सरकारहरु पनि अदल बदल भैरहलान् । तर नेपालै नरहे हाम्रो अवस्था के होला ?
नेपाल जसको उत्तरतिर ६२ गुना ठुलो र संसारकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको चीन छ । पूर्व, पश्चिम र दक्षिणबाट नेपाल भन्दा २२ गुना ठुलो र करिब डेढ अरब जनसंख्या भएको भारतले घेरेको छ, जसको जनसंख्या वृद्धिदर अत्यन्तै बढी छ र नेपालसँगगको सिमाना खुला छ । स्वयम मधेसकै बुद्धिजीवीहरुले भनिरहेका छन् कि, यदि यसरी चोर बाटोबाट विदेशीहरुलाई नागरिकता वितरण गर्दै जाने हो र वर्तमान संविधानमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो प्रावधानलाई नसच्चाउने हो भने अबको दुइटा चुनाव पछि नेपाल नेपालीहरुको हातमा रहने छैन । वास्तवमा यो विष्लेषणमा सत्यता छ । अझ यो प्रक्रियालाई छिटो गराउन यिनै केपी ओलीको अघिल्लो सरकारको पालामा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान संसदबाट पास गराइएको छ।
पुर्खाहरुले रगतसँग साटेर बचाएको देश हो नेपाल । कसैको सत्ता भन्दा सस्तो राष्ट्रको मूल्य हुन सक्दैन । त्यसकारण कुनै पक्ष र विषय बस्तुको समर्थन र बिरोध गर्दा पूर्वाग्रह र अन्धभक्त भएर होइन, जुनसुकै पक्षले गरेको भए पनि सही कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गरेर नै हामी देशका सच्चा नागरिक कहलिन सक्नेछौँ । न कि पूर्वाग्रह, अन्धभक्त र आवेगमा आधारित उत्ताउला स्टाटस र कमेन्ट लेखेर ।
(लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चाका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
← रगतमा अक्सिजन बढाउनका लागि खानुहोस् यस्ता खानेकुरा
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अझै पनि महतोको समर्थनमा →
4 July 2020 Nepaliekta 0
व्यवस्था भ्रष्ट, हामी अनुशासन विहिन !